Faahfaahin: Heshiiska Somaliland iyo Taiwan kala saxiixdeen ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Faahfaahin: Heshiiska Somaliland iyo Taiwan kala saxiixdeen ‘sawirro’
Faahfaahin: Heshiiska Somaliland iyo Taiwan kala saxiixdeen ‘sawirro’
Jasiiradda Taiwan oo uu adduunka u aqoonsan yahay maamul hoosaad ka tirsan dalka Shiinaha balse ku doodo in ay tahay dal madax bannaan ayaa maalintii shalay oo ay taariikhda aheyd 1-da Luulyo waxey sheegay Somaliland u aqoonsaday dal madax banaan oo ka jira geeska Afrika iyo in ay heshiis la saxiixatay.
Labada dhinac ayaa heshiiskaan kala saxiixdey February 2020 balse shaacinta iyo faahfaahinta heshiiskaan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Yaasiin Maxamuud Faratoon oo dhawaan booqday magaalada Taipei ee caasimadda Taiwan iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo Talaadadii sheegay in uu wakiil u magacaabi doono Taiwan.
Heshiiska ayaa dhigayo in labada maamul ay magaalooyinka Hargeysa iyo Taipei ka furtaan xafiis malato danaha labda maamul, in layska kaashado caafimaad, wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga iyo isgaarsiinta, iyo arrimo kalo oo la shaacin weli.
Taiwan ayaa dooneyso in ay noqoto dowlad ka madax bannaan dalka Shiinaha balse Shiinaha ayaa wacad ku maray in xoog milateri ku soo celin doono hadduu u arko in ay Taiwan xadkeedi dhaafay. Wixii ka dambeeyey 2007 Taiwan ayaa waxuu uu hoos u dhac ku yimid dalalkii xiriirka siyaasadeed iyo dhaqaale la lahaa kadib markii dowladda Shiinaha ay billowdey in ay cadaadis xoogan saarto dowladaha iyo ururaha xiriirka la lahaa Taiwan.
Tallaabadaan ay qaadeen Somaliland iyo Taiwan ayaa noqon doonto mid ka careysiiso dowladaha Shiinaha iyo Soomaaliya maadaama ay labadaan dal u arkaan Taiwan iyo Somaliland in ay dhul ahaan ka kala tirsan yihiin.